ngomphathi ku 20-08-24
Solar wachaza photovoltaics kunye nombane
Iiseli ze-Photovoltaic ziguqula ukukhanya kwelanga kube ngumbane Iseli ye-photovoltaic (PV), ebizwa ngokuba yiseli yelanga, sisixhobo esingajoliswanga esiguqula ukukhanya kwelanga kube ngumbane ngqo. Ezinye iiseli ze-PV zinokuguqula ukukhanya okungekuko kube ngumbane. Iifoto zithwala amandla elanga Ukukhanya kwelanga kwenziwe ...
Kutheni le nto kufuneka uye kwi-photovoltaics?
ngomphathi ku 20-06-25
Igama elithi photovoltaics (PV) laqala ukukhankanywa malunga ne-1890, kwaye livela kumagama esiGrike: ifoto, 'phos,' okuthetha ukukhanya, kunye ne 'volt,' ebhekisa kumbane. I-Photovoltaic, ke, kuthetha umbane okhanyayo, uchaza kanye indlela ezisebenza ngayo izixhobo ze-photovoltaic kunye nezixhobo. Imifanekiso ...
I-Photovoltaics kukuguqulwa ngokuthe ngqo kokukhanya kombane kwinqanaba leathom. Ezinye izinto zibonisa ipropathi eyaziwa ngokuba yifotoelectric effect ebangela ukuba bathathe iifoto zokukhanya kunye nokukhupha ii-elektron. Xa ezi elektroni zasimahla zifakwa, i-electri ...